Qatar na-esonye na nnọkọ 113th nke Executive Council of UNWTO
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Qatar » Qatar na-esonye na nnọkọ 113th nke Executive Council of UNWTO
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Onye nnọchi anya Qatar na Spain Abdullah bin Ibrahim al-Hamar nọchitere anya Qatar na nnọkọ UNWTO
State nke Qatar sonyere na nnọkọ 113th nke Executive Council of the UN World Tourism Organisation (UNWTO) na isi obodo Spain nke Madrid.
Onye nnọchi anya Qatar na Spain Abdullah bin Ibrahim al-Hamar nọchitere ya na nnọkọ nke steeti Qatar.
Na sidelines nke UNWTO nnọkọ, Prime Minista Spanish Pedro Sanchez zutere na onye nnọchianya nke Qatar. N'ime nzukọ ahụ, ha tụlere mmekọrịta mba abụọ ahụ.
Onye nnọchi anya ahụ sonyekwara na nzukọ mbụ nke Kọmitii Nsogbu Nsogbu Ndị njem na Global iji kwurịta nsogbu ụwa niile ugbu a na-eche mpaghara ndị njem ahụ.
Kọmitii ahụ kwusiri ike mkpa ọ dị imeri ihe ịma aka site na mgbalị siri ike iji maliteghachi njem njem njem zuru ụwa ọnụ.